Chii chinonzi murimi? | Kuumbwa uye kudzidza
Chii chinonzi murimi?
Maite Nicuesa | | Jobho Kubuda
The sector of Zvekurima Icho chimwe chezvakanyanya kukosha. Chikamu mune mahunyanzvi vane hunyanzvi mundima iyi vanoshanda pane hwaro hwehunyanzvi. Mimwe yematarenda matsva inotanga nzira yehunyanzvi iyo inokurudzirwa nemuenzaniso wevamwe vadikani vanobatana zvakanyanya nenyika yekurima.
Icho chikamu chakanangana zvakananga nechinodiwa chakakosha mune chero nguva yenhoroondo: chikafu. Naizvozvo, inovhara chakakosha kudiwa muhuwandu.
1 Kukosha kwekushanda mune yakakosha chikamu
2 Chii chinonzi ecological kurima
3 Kukosha kwekurima munharaunda yekumaruwa
Kukosha kwekushanda mune yakakosha chikamu
Murimi anoita basa rake akabatana nekusingaperi nemunda uye nemitupo yake. Nguva yega yega yekendari inopa michero yemwaka nemiriwo iyo, nekudaro, iri mune yakanakisa nguva. Murimi anoshanda munzvimbo yakatambanuka maanorima ivhu. Kunge mamwe matunhu, kurima kwakawanawo shanduko pamwe nekubatanidzwa kwetekinoroji.
Parizvino, murimi ane maturusi nezviwanikwa zvaanoshandisa kuita basa rake, zvinoreva kuti nyanzvi dzaiita basa rimwe chete kare hadzina, asi nematurusi mashoma. Kunge chero basa ripi zvaro, basa remurimi rinoda kudzidza nekugadzirira zvakakwana. Kurovedza kwakakosha kutarisana nematambudziko anounzwa nebasa rezuva nezuva.
Chii chinonzi ecological kurima
Chikamu chekurima chinoumbwa nenyanzvi dzinoshanda sechikwata. Zvinofanira kuratidzwa kuti, parizvino, zvimiro zvitsva senge kurima kwehupenyu kuri kubuda. Ichi chirevo chinoteedzera chakakosha chinangwa kubva mukuremekedzwa kwechisiko uye kuchengetwa kwepasi. Maitiro akaratidzirwa anotsvaga zvakasikwa mumaitiro kuitira kuti uwane michero nekunyatsogadzirisa zviwanikwa zvese zviripo.
Kukosha kwekurima munharaunda yekumaruwa
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti basa remurimi harisi rekutanga chete kune nzanga, asiwo kusimudzira nharaunda yekumaruwa nemaguta. Parizvino, dzimwe nzvimbo dzakaona kurasikirwa kukuru kwevanhu mumakore achangopfuura.
Nzvimbo diki dzevagari dzisingatarise ramangwana renguva refu, nekuda kwekushayikwa kweshanduko yerudzi. Vazhinji vechidiki vanoenda parwendo kunotanga chirongwa chehupenyu muguta. Rwendo runokurudzirwa nechishuwo chekuwana mikana yehunyanzvi uye kuve neyakagadzika-refu basa. Kugadziridza, kusimudzira uye basa zvakakoshawo mumamisha. Uye ndipo pari apo kurima kune kukosha kukuru munhoroondo, kukosha kunotakura kumaguta. Inopa sosi yehupfumi, inosimbisa hupfumi uye inogadzira mikana yemabasa. Asi basa remurimi rinowiriranawo nebasa, kuzvipira uye kuzvipira. Iri ibasa rinoda uye rehunyanzvi.
Zvekurima zvakabatana zvakanangana nemitemo yenyika, nekudaro, murimi inyanzvi inoziva izvo zvakakosha zvinodiwa kuti uve negoho rakanaka. Mamiriro ekunze anokanganisa mhedzisiro kusvika padanho rekuti mamiriro ekudenga anokwanisa kudzora kugona kwemwaka. Mwaka wakagadziriswa nekushaikwa kwemvura kana, nekusiyana, nemvura yakawandisa, inogona kuburitsa zvisingatarisirwe. Chando chinotonhora chinogona zvakare kuve nemhedzisiro isingadiwe.
Parizvino, kurima kwakanyudzwa munguva yeshanduko, semamwe matunhu, sezvo shanduko yedhijitari iripowo munzvimbo ino. Nechikonzero ichi, chikamu chinopa mikana yakawanda yemabasa uye icho chinodawo matarenda matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Chii chinonzi murimi?
Chii chinoitwa ne traumatologist?